Wasiir Beyle oo ka qeyb galay Shirka Qurba-joogta Soomaaliyeed ee magaalada Washinton | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiir Beyle oo ka qeyb galay Shirka Qurba-joogta Soomaaliyeed ee magaalada Washinton
Wasiir Beyle oo ka qeyb galay Shirka Qurba-joogta Soomaaliyeed ee magaalada Washinton
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya C/raxmaan Ducaalle Beyle oo ku sugan dalka mareykanka ayaa qudbad dhinacya badan taabaneysa u jeediyay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Washinton ee dalka Mareykanka.
“Sharaf ayay iitahay in aan khudbad muhiim ah ka jeediyo shirka Qurba-Joogta Soomaaliyeed ee Magaalada Washington oo aan u faah faahiyay guulaha dhaqaale ee aan gaarnay iyo inta wali aan tiigsaneyno ku guuleysigooda” ayuu yiri Wasiir Beyle.
Wasiirka ayaa Soomaalida ku nool qurbaha ku ammaanay dadaalka iyo dhaqaalaha ay u soo diraan dalka, taasoo wax badan ka qabatay baahiyaha qaar ee dalka ka jira.
“Qurba-joogta Soomaaliyeed waxbadan ayay Dalka u qabteen, kabadan ayaa wali looga sii baahanyahay” ayuu yiri Wasiirka
Wasiir Beyle ayaa Dhammaan dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay iska kaashaadaan horumarinta dalka, isagoo sheegay in muwaadin kasta looga baahanyahay in uu qeyb ka noqdo hormarka iyo nabad gelyada dalka.
Previous articleQM oo ka hadashay xaaladda Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Xeryaha Dhadhaab Kenya
Next articleXaaladda caafimaad ee dhaawacyadii loo qaaday Dalka Qatar oo soo hagaageyso